Gratings Factory - Mpanamboatra gratings China, mpamatsy
SC-1606 Fitotoam-bary tsy misy fangarony vita amin'ny vy vita amin'ny mpanamboatra an'i Sina
* Azo namboarina manokana arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
* Ireto misy famaritana momba ny vokatra ankapobeny.
* Ventilation, jiro, fanaparitahana ny hafanana, tsy slip, porofo mipoaka tsara.
* Mora apetraka ary esorina.
* Ny lamina dia azo atao amin'ny mpanjifa.
SC-1604 Anti-harafesina tsy misy vy makarakara vy sy ny tatatra vita amin'ny orinasa China
* Ity vokatra ity dia manana fahaiza-mitondra mavesatra be miaraka amin'ny fananana manohitra ny fiatraikany.
* Ny fonony sy ny endriny dia ampiarahina amin'ny hinge. Izy io dia fanoherana ny halatra, azo antoka ary mora misokatra.
* Raha mampiasa vy, faritra midadasika ho an'ny famoahana rano amin'ny alàlan'ny fitsaboana mafana milonika mafana, manintona sy mateza.
* Fisehoana tsara tarehy, endrika mamirapiratra
* Karazana makarakara vy
W-tsindry nohamafisiny makarakara
L-tsindry mihidy mihidy makarakara
C-socket welding makarakara
Fitaovana fananganana vy vita amin'ny vy matihanina
Ity kofehy vy tsy misy fangarony ity dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra namboarinay, izay namboarin'ny sampana Triangle. Ity famolavolana ity dia manana tombony amin'ny fanaovana ny elanelan'ny elanelana ambonin'ny tany, fa ny rano kosa handeha moramora kokoa raha oharina amin'ny karazany mahazatra. Ity faritra ity aza dia azo antoka na dia ny kiraro avo volo aza.
Fitaovana manara-penitra avo lenta 304 na 316 Stainless Steel Grating milentika fantsona vy tsy misy fangarony
Grating vy, namboarina ho maro andalana lavaka fisaka, kanto sy fohy miaraka amina asa kanto mahafinaritra dia ampiasaina indrindra amin'ny trano sy ny varavarana. Ny vy makarakara vy dia azo alaina amin'ny endrika maro isan-karazany ho an'ny haingon-trano sy ny rafitra fanosika, mifanaraka amin'ny hatsarana sy azo ampiharina rehetra ao anatin'ny iray.
SC-1607 Namboarina tsara fantsona fantsom-baravarankely tsy misy fantsom-baravarankely
Grating vy tsy miovaova, fantatra ihany koa amin'ny hoe Welded Stainless Bar Bar Grate dia asa mahafinaritra sy maharitra ho an'ny rindranasa mitondra entana rehetra ary ampiasaina indrindra amin'ny atiny sy ivelany. Ny vy makarakara vy dia azo alaina ao anaty elanelam-bara misy habe sy hateviny arakaraka ny fampiharana sy ny enta-mavesatra.
Namboarina manokana endrika endrika fantsom-drano fitaratra rano fantsona rano China Factory
Ity karazana vy makarakara vy ity dia vita amin'ny famolavolana adidy mavesatra mba ho afa-po amin'ny fiarovana amin'ny harafesina, miantoka maharitra sy azo ianteherana. Vita amin'ny alàlan'ny vy tsy misy fangarony 304 na 316 avo lenta miaraka amina fomba fiasa tsara.
Handrails, Fametahana Handrail mitsangana, Takelaka fototra Handrail, Tohatra Handrail Bracket, Handrail vy tsy miova, Handrail amin'ny vy mahery,